Yeyona Khosi ye-Forex yeJanuwari nge-2022 | Eyona mfundo ye-Forex-Funda ngoRhwebo olu-2
Yiba nguMrhwebi oQeqeshelweyo we-Forex
FUNDA II-2 ZE-FOREX COURSE
£ 99 Ngaxeshanyeintlawulo
Fumana iKhosi yokuFunda ngeSifundo esiSimahla se2, Vula iAkhawunti ngeToro kwaye wenze idiphozithi!
Fumana ikhosi simahla!
Vula zonke izahluko ezili-11 nge- $ 99 nje!
Yazi ukuba uza kuthengisa nini kwaye nini!
Funda kwifowuni yakho okanye kwidesktop!
Imfundo yobungcali evela kubarhwebi bokwenyani!
Fumana enye iakhawunti yepremiyamu yonyaka simahla!
Bhalisa umdla wakho kunye neqabane lethu, i-FCA elawulayo ye-FX / CFD broker, i-eToro kwaye ufumane iiNqaku ezi-2 zoRhwebo ze-Forex zeSIMA simahla sonyaka omnye!
Ii-CFDs zizixhobo ezintsonkothileyo kwaye ziza nomngcipheko omkhulu wokulahleka kwemali ngokukhawuleza ngenxa yokufumana amandla. I-70.16% yeakhawunti yotyalomali yabatyali mali ilahle imali xa kuthengiswa iiCFDs / Ukusasaza ukubheja nalo mboneleli. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba uyayiqonda indlela iCFDs / Umsebenzi wokusasaza ukubheja nokuba unokwazi ukuthatha umngcipheko omkhulu wokuphulukana nemali yakho.
Qalisa iKhosi yesi-2 yoRhwebo nge-Forex!
Fumana iitoni zeengcebiso, iimeko zophononongo, imizekelo kunye neebhonasi, zonke zinobuhlobo, kulula ukuziqonda, ngendlela enobuchule
Vavanya ulwazi lwakho ngemibuzo eyahlukileyo, ziqeqeshe emva kwesahluko ngasinye
Ziqhelise konke okufundayo ngokuthe ngqo kwiakhawunti yakho, ngamaxabiso entengiso aphila
Ikhosi yethu inayo yonke into oyifunayo ukuze ube ngumrhwebi we-Forex. Thatha indawo yentengiso yemali kwizifundo ezili-11 kwaye ufunde indlela yokurhweba nge-Forex njengengcali.
Ngokuthatha ikhosi yethu ye-Forex yorhwebo, uya kufunda:
Waqonde amathuba oshishino
Sebenzisa intshukumo yamaxabiso emali
Uqikelelo lweziganeko zexesha elizayo kunye nefuthe lazo kwizimali
Sebenzisa zonke izixhobo kunye noncedo olunikezelwa ngamaqonga orhwebo
Phumeza uhlalutyo lobugcisa nolusisiseko
Qala ukwenza inzuzo kwaye uqale uhambo lwakho oluya empumelelweni!
Iindlela ezahlukeneyo zokurhweba
Olu luluhlu oluneenkcukacha lwezahluko, izifundo, kunye nezihloko oza kuzifumana kwiKhosi yokuRhweba yokuRhweba yesi-2:
Ukulungiselela iKhosi yoRhwebo yokuFunda 2
Imakethi ye-Forex yimarike yehlabathi yezezimali (ezibizwa ngokuba zizixhobo). Imarike ilinganisa ixabiso lemali ngokwexabiso lenye imali (umzekelo, $ 1 = £ 0.66).
Amanyathelo okuQala ekuFundeni urhwebo lwesi-2 - Isigama esisisiseko
Kubaluleke kakhulu ukwazi iSigama soRhwebo sesi-2 ukuze urhwebe ngolwazi. Isigama kubalulekile ukuba ukwazi ukufunda iikowuti zexabiso lemali.
Ngqamanisa ixesha nendawo yokuThengiswa kweNgxowa-mali
Lixesha lokuba ufunde ngakumbi ngeemarike. Inyathelo lethu ngenyathelo lokuhamba nge-Forex iyaqhubeka. Ke ngaphambi kokutsiba emanzini anzulu, masimanzise iinyawo zethu kuqala, kwaye siqhelane nobushushu… kwaye sigxile kule migaqo ilandelayo yokuthengisa kwangaphambili:
Zilungiselele ukuFunda ngoRhwebo 2
Ngoku ukuba umanzise iinzwane zakho, sikulungele ukuqala izifundo zokuqubha… Masingene ngqo ngaphakathi. Ngoku siza kuqala ukukunika izixhobo ezisisiseko eziyimfuneko ukuze ube nempumelelo Funda ngorhwebo 2.
Ezisisiseko Funda iiQhinga ezi-2 zoRhwebo
Ngamanye amaxesha indlela esisiseko ibaluleke ngakumbi kunaleyo yobuchwephesha. Ukusuka eGeorge Soros ukuya eWarren Buffet, abanye babarhwebi abadumileyo kwihlabathi bavumile ukuba banetyala ngenxa yohlalutyo olwenziweyo kule minyaka idlulileyo.
Izicwangciso-qhinga zokuRhweba nge-Forex
Lixesha lokuba ungene ngqo kwisithuba sezinto kwaye uqale ukufunda ngohlalutyo lobuchwephesha, enye yezona ndlela zixhaphakileyo zokurhweba ngaphambili. KwiSahluko 6 siza kuthetha ngezinye zezona ndlela zaziwayo zokurhweba ngaphambili.
Isalathisi seFibonacci sobuGcisa
Kwizahluko ezibini ezilandelayo, uya kufumana intshayelelo eneenkcukacha kwibhokisi yezixhobo zakho zobugcisa. Wonke umntu oqeqeshiweyo unezakhe izixhobo zokusebenza kwaye ke nabarhwebi be-Forex. Ibhokisi yethu yezixhobo iqulethe izixhobo ezahlukeneyo zohlalutyo. Ezi zixhobo ziluncedo kuhlalutyo lobuchwephesha olusebenzayo, (ngaxeshanye, kwiimeko ezininzi, zixhasa izigqibo ezisisiseko).
Iimpawu ezingakumbi zoRhwebo
Ukudibana noMnu Fibonacci, lixesha lokuba wazi ezinye izikhombisi ezithandwayo zobugcisa. Izikhombisi malunga nokufunda malunga neefomula kunye nezixhobo zemathematika. Njengamaxabiso atshintsha ngalo lonke ixesha, izikhombisi zisinceda sibeke amaxabiso kwiipateni nakwiinkqubo.
Iindibaniselwano zokubulala ezi-6 zeQhinga lokuRhweba
Kwisahluko 9 siza kukubonisa ukuba zeziphi iindlela zokurhweba onokuzidibanisa ukuze ufumane ezona ziphumo zihle (ezimbini zihlala zibhetele kunenye).
Umngcipheko kunye noLawulo lweMali
KwiSahluko se-10- uLawulo loMngcipheko kunye noLawulo lweMali siza kuthetha ngendlela yokunyusa inzuzo yakho ngelixa unciphisa umngcipheko, usebenzisa esinye sezixhobo ezibaluleke kakhulu kurhwebo lwe-forex- imali efanelekileyo kunye nolawulo lomngcipheko. Oku kuyakunceda ukunciphisa umngcipheko kwaye uqhubeke ukuvumela ukuba wenze inzuzo entle.
Funda i-2 yoRhwebo ngokunxulumene neeSitokhwe kunye neMveliso kunye noRhwebo neMetaTrader
Kwisahluko se-11 -Funda ukurhweba oku-2 ngokunxulumene nee-stocks kunye neeMveliso kunye noRhwebo neMetaTrader uya kufunda malunga nobudlelwane phakathi kwesitokhwe, ii-indices, kunye nezinto zorhwebo kwi-2 yentengiso yorhwebo. Ukongeza, uya kufunda ukuba ungalazi njani iqonga leMetaTrader.
Ikhosi ye-Forex kunye ne-Forex- ngenye indlela ekubhekiswa kuyo njenge-'FX ', yeyona ndawo yentengiso inkulu kunye neyona ilulwelo kwihlabathi liphela. Ibandakanya ukurhweba ngeemali imini nobusuku, 24/7. Kunye nabachaphazelekayo kubandakanya abarhwebi, iibhanki, abatyali mali kunye nabakhenkethi- i forex ibandakanya ukutshintsha imali iye kwenye.
Njengomtshato wemali notshintshiselwano-abathengisi kwihlabathi liphela bathenga kwaye bathengise ezi mali ngombono wokufumana inzuzo okanye ukubiyelwa. Ibango kunye nonikezelo olumiselwe kwezi marike koko lubeka izinga lotshintshiselwano lwemali.
Nokuba umtsha kurhwebo lwe-forex okanye ungumrhwebi onamava, ulwazi ngamandla. Kananjalo, iqela lethu leengcali apha kwi-Learn 2 Trade libeke ndawonye isikhokelo esigcwele ulwazi oluncedo.
Kule khosi ye-forex, siza kukuqhuba kuyo yonke into oyifunayo malunga neemali zokuthengisa. Oku kubandakanya isigama esisisiseko, uhlalutyo lobuchwephesha, ukufundwa kwetshathi, iindlela zokurhweba, ulawulo lomngcipheko, nokunye okuninzi!
I-Forex ikakhulu yimarike yotshintshiselwano lwangaphandle, ethelekiswa neLondon Stock Exchange okanye i-NASDAQ, kodwa ngezemali ezivela kwihlabathi liphela. Ngamanye amaxesha kubizwa ngokuba yi-FX, i-forex inoxanduva lokutshintsha kwemali yeemali ezimbini (ekubhekiswa kuzo njengedidi lwemali). Nabani na onokuzibandakanya kwaye azame ukwenza inzuzo kule marike yorhwebo.
Ngeenkampani, iibhanki kunye nabatyali mali bonke abathengayo nabathengisa iimali zangaphandle iiyure ezingama-24 ngosuku kunye neentsuku ezisi-7 ngeveki, kucacile ukuba urhwebo nge-forex luyanda ngokuthandwa phakathi kwabatyali zimali kunye nabarhwebi kwihlabathi liphela. Kwaye kuqikelelwa kwi-5 trillion yeedola zaseMelika ukuthengiswa yonke imihla, imarike ye-forex ayibonisi phawu lokucothisa.
Indawo yokurhweba igubungela iinjongo ezahlukeneyo, njengokutshintshiselana ngeemali zamanye amazwe kukhenketho, iqumrhu elijonge umngcipheko wothango, okanye mhlawumbi nje ukwenza urhwebo olunokubonisa ukuba lunenzuzo. Nokuba siyintoni na isizathu, enye yezinto eziphambili ezitsala inyani kukuba wakuba uvule indawo ungabeka ilahleko yokumisa ngokuzenzekelayo endaweni yayo, evala urhwebo lwakho ngendlela enobungozi.
Ekugqibeleni, ngokokubona kwakho, eyona nto iphambili kwintengiso ye-forex kukuthengisa okanye ukuthenga ii-curpto zodwa, ngenjongo yokwenza imali. Uya kuyiphumeza le njongo xa ucacisa ngokuchanekileyo ukuba loluphi uhlobo lotshintshiselwano oluthile oluhamba kwixesha elifutshane.
Ngokulandelayo kule khosi ye-forex, siza kuqhuba ngamanye amabinzana asetyenziswa kakhulu kunye nemigaqo esetyenziswe kwisithuba.
Ikhosi ye-Forex: Amagama aqhelekileyo asetyenziswa
Thina kwi-2 Trade yorhwebo sikholelwa ukuba ukusika i-jargon kubalulekile xa kuziwa ekufundeni nasekuzuzeni kwizakhono zakho ze-forex.
Apha ngezantsi uyakufumana uluhlu lweyona migaqo ibalulekileyo ekufuneka uyijongile.
Ngokwenyani, izibini zemali eziqwalaselwe njengezona zilulwelo zizezona zemali zidumileyo (ukubonelela kunye nemfuno). Ezi zaziwa ngokuba 'zizibini eziphambili'. Utyalo-mali lwabarhwebi, iibhanki, abarhwebi abathumela izinto kwamanye amazwe kunye nabangenisa elizweni ngokwenyani benza oku kubonelela kubaluleke kakhulu.
Umzekelo omkhulu wesibini semali engamanzi iya kuba yi-EUR / USD. Ngapha koko, kukholelwa ngokubanzi ukuba esi sesona sibini semali kulwelo kwimarike ye-forex. Kwakhona oku kuphantsi kokubonelela kunye nokufuna, kwaye yiyo loo nto-yeyona nto kuthengiswa ngayo kakhulu.
I-EUR / USD ibonelela abathengisi ngeendlela ezahlukeneyo zokurhweba. Kungenxa yenani elikhulu le- iipipi zihamba mihla le. Ngomndilili ophakathi kwe-90 kunye ne-120 pips, kuyacaca ukuba kutheni le nto ithathwa njengesibini esingamanzi.
Ezinye iindidi zemali ezidumileyo zezi zilandelayo:
I-GBP / i-USD: Iponti enkulu yaseBritane / yeDola yaseMelika
I-AUD / i-USD: Idola yase-Australia / i-United States yeDola
I-USD / JPY: Idola yaseMelika / iYen yaseJapan
I-USD / CAD: Idola yaseMelika / iDola yaseKhanada
I-USD / CHF: Idola yaseMelika / iFranc yaseSwitzerland
Nantsi imizekelo embalwa xa kufikwa ekusebenziseni okuncinci kunye nangaphezulu 'ngokungaqhelekanga' ngababini bemali
I-EUR / GBP: I-Euro / iSterling.
I-NZD / JPY: Idola yaseNew Zealand / iJapan Yen.
I-GBP / JPY: Iponti enkulu yaseBritane / iJapan Yen.
I-EUR / AUD: I-Euro / iDola yaseAustralia.
I-GBP / i-CAD: Iponti enkulu yaseBritane / iDola yaseKhanada.
I-AUD / HKD: Idola yase-Australia / i-Hong Kong yeDola
Ngelixa zingathandwa kangako kunee-majors, akunakwenzeka ukuba wenze kakuhle kwezi zibini ngolwazi oluncinci.
Nangona, umzekelo, i-AUD / NZD ayithambekisi ukuhambisa iipip ezininzi ngosuku lokurhweba, sicinga ukuba kuseluncedo ukuziqhelanisa neebhangqa zemali ezingaqhelekanga. Okukhona usazi ukuba uzilungiselele ngcono-uya kuthi uthathe isigqibo sokunika isibini esincinci okanye esingaqhelekanga esidlulileyo.
Umbhobho (Khomba ngepesenti)
Umbhobho umele elona xabiso liphantsi elinokuthi litshintshe ikowuteshini yemali, ngaphakathi kwintengiso ye-forex. Umbhobho, othetha 'inqaku kwipesenti', ubonisa naluphi na utshintsho oluncinci oluphawulwe kwisibini semali ye-forex.
Iyunithi yesiseko kwixabiso lesibini semali ngokuyimfuneko ngumbhobho, ke 0.0001 yexabiso elicatshulweyo.
Umzekelo, ukuba ixabiso lokubhida le-EUR / GBP yemali isuka kwi-1.15701 isiya kwi-1.15702, oku kukubonisa njengomrhwebi ukuba umahluko ngowombhobho omnye.
Nokuba unokuqonda okusisiseko kuphela kurhwebo lwe-forex, ngokuqinisekileyo awuyi kuva nge sasaza. Ukuba nokuqonda okusisiseko kokusasazeka kunye nendlela esebenza ngayo kwintengiso ye-forex ngokuqinisekileyo kunokukunceda wenze inzuzo ekuhambeni kwexesha.
Ngokubanzi, ezona zibini zisetyenziswa kakhulu ziya kuba nokusasazeka okuqinileyo, kwaye okona kuncinci kuya kusasazeka phezulu. Ngamanye amaxesha ezona zixhaphakileyo zihlala zisasazeka ngaphantsi kombhobho.
Ukusasazeka ngumahluko phakathi kweendleko zokuthenga kunye nexabiso lentengiso lesibini semali, kwi-broker oyikhethileyo. Ezi ndleko ziya kutshintsha kwaye zijikeleze ngalo lonke usuku lokurhweba, kwaye nantoni na eyenzekayo, iboniswa kukusasazeka.
Inzuzo oyenzayo kurhwebo kufuneka idlule ekusasazekeni kwakho ukuze wenze inzuzo.
Asikwazanga ukwenza iphepha lekhosi ye-forex ngaphandle kokuthetha ngomgama. Emva kwakho konke, imida iyinxalenye ebalulekileyo yorhwebo lwe-forex.
Isixa semali esibekwe phambili ngumrhwebi ukuze abeke urhwebo okanye agcine isikhundla sibizwa ngokuba ngumda. Le inokuba yindlela elungileyo yokuba abathengisi bakhe amathuba abo okuthengisa.
Umda wakho uya kugcinwa ngumthengisi we-forex ngelixa urhwebo lwe-forex luvulekile. Ngokusisiseko, umda ufana nokuhlawula ezantsi, endaweni yexabiso lokuthengiselana.
Abarhwebi be-Forex bahlala benika abathengi babo ukufikelela kubungakanani (jonga ngezantsi). Ngokuqhelekileyo, umrhwebi we-forex ufuna umgama ophezulu ukuze bakwazi ukuthengisa ngexabiso eliphezulu. Kananjalo, ukuze wenze inzuzo efanelekileyo ngokwaneleyo yokufumana inzuzo iya kubonelelwa.
Kwabaninzi abathengisi be-forex, izixhobo zokuncedisa ezinikezelwa ngumthengisi wabo we-forex ingaba yindlela efanelekileyo yokukhuthaza izikhundla zeemarike. Imali eyinkunzi ibonakaliswa ngesiqhelo sombane, kwaye oku kunjalo kubarhwebi be forex banokwandisa inani lezinto ezinokubonelela kubathengi balo.
Ngaphambi kokuba uqale ukurhweba ngeli xesha usebenzisa ithuba lokunyusa, kuyakufuneka uvule iakhawunti yomda kunye nomthengisi we-forex. Kuxhomekeke kubukhulu besikhundla sakho kunye nomrhwebi ekuthethwa ngaye, ubukhulu becala buhlala buphezulu njenge-200: 1. Kodwa, i-UK kunye nabathengi abathengisayo baseYurophu bahlala befakwa kwi-1: 30-ngokwemigaqo ye-ESMA.
Iqela lethu kwi-Learn 2 Trade libeke ndawonye imizekelo emi-3 yokuphakamisa.
Umzekelo 1: Ukuba ubambisa i-100 yeedola kwisisombululo se-1: 10, ke urhwebo lwakho luxabisa i-1,000 40 leedola. Ukuba uqale wenza ingeniso eyi- $ 400, oku kuyakwandiswa ukuya ku- $ XNUMX.
Umzekelo 2: Ukuba ubungakanani bakho buyi-1: 20 kwaye une- $ 1,000 kwiakhawunti yakho yorhwebo-ungarhweba nge-10,000, 20 yeedola kwisibini sakho semali. Ngamanye amagama, zonke izibonelelo kunye nelahleko zonyuswa nge-XNUMXx.
Umzekelo 3: Ukuba unesikhundla eside se-GBP / USD ngesibonda se- $ 500 kwisisombululo se-1: 30, inzuzo kunye nelahleko yakho ziya kwandiswa nge-30x. Ke, ukuba wenza i-10%, iinzuzo zakho ziya kusuka kwi- $ 50 ukuya kwi- $ 500.
Njengokukhanya nobumnyama, oko kuzisa umvuzo kunokuzisa ilahleko. Ngalo lonke ixesha yazi ukuba ngeli xesha ukubalasela kungagqwesa ekunyuseni ezo ngeniso, kungakonyusa nelahleko xa ungalumkanga.
Ukuba iakhawunti yakho iyenzeka ukuba yehle ngaphantsi kwe-zero, unokukwazi ukunxibelelana nomthengisi wakho we-forex ukuze ucele umgaqo-nkqubo olungeleleneyo. Ngokwenza njalo, oku kuyakuqinisekisa ukuba awulahleki ngaphezulu kwemali oyibeke kwindawo yokuqala.
Ngumlinganiso okhuselayo kubarhwebi kwaye uya kukunika uxolo lwengqondo lokuba awuweli ematyaleni kunye nomthengisi wakho we-forex. Iindaba ezimnandi zezokuba uninzi lwabarhwebi be-intanethi abakwi-Intanethi babonelela ngokukhusela ibhalansi engalunganga ngokuzenzekelayo, nangona kunjalo, kuya kufuneka ujonge oku ngaphambi kokuba ubhalise. Oku ikakhulu ngamatyala kubarhwebi abawela ngaphakathi kuxolelo lwe-ESMA.
Ukuthengiswa kwangaphambili: Imiyalelo eqhelekileyo esetyenziswayo
Kule candelo lekhosi yethu ye-forex, sichaza ezinye zeentengiso ezisetyenziswa ngokubanzi, kunye nenkcazo nganye. Oku kubalulekile, njengoko le miyalelo iya kugqithiselwa kwi-forex broker oyikhethileyo, ukuze ikwazi ukwenza izikhundla egameni lakho.
Ukuba njengomrhwebi ulindele ukuba ixabiso leasethi lihle, uya 'kufutshane'. Isizathu soku kukuba ukuze uxhamle ekuthengeni iiasethi ngexabiso eliphantsi, kufuneka ubeke 'i-odolo yokuthengisa'. Kwangokunjalo, ukuba ucinga ukuba ixabiso lesibini liya kunyuka, ubeka 'i-oda yokuthenga', eyaziwa ngokuba 'kukuhamba ixesha elide'.
Indlela elula yokujonga ixabiso lesibini semali kukuba iya kusekelwa kwixabiso lemali yesi-2, kwaye ungakanani onokutshintsha imali ye-1. Ngamanye amagama, ixabiso lesibini semali liya kusekelwa kwinqanaba lotshintshiselwano lwangoku lwemali (njengebini). Umzekelo, ukuba i-EUR / USD ixabiso lentengo kwi-1.14, ngoko ufumana i-1.14 USD kwi-1 EUR nganye.
Umrhwebi we forex uza kukubonelela ngokuthenga (thenga iodolo) kunye nexabiso lokuthengisa (ukuthengisa iodolo) ngokusekwe macala elo nani. Umahluko phakathi kwamaxabiso amabini kukusasazeka.
Ngoku masithi uthenge isixhobo sokuqala semali njenge-GBP / JPY kwaye ukhethe ukuhlala kwindawo ende. Oku kuthetha ukuba uqikelela ukuba i-GBP iza kunyuka ngexabiso ngokuchasene ne-JPY. Ukuba uthenge i-GBP / JPY isibini, oko kuthetha ukuba unezikhundla ezi-2 ezide zesibini semali (i-USD / JPY). Imali esisiseko kwesi sibini yi-GBP, kwaye ubungakanani bendawo leyo ngamaqashiso ama-2 (iikhontrakthi), kwaye umkhombandlela 'mde'.
Ikwabizwa ngokuba ngumda wokuthenga umda, oku kubalulekile ukuba utsho ukuba ufuna ukungena kwintengiso ngexabiso elithile. Umzekelo, ukuba i-GBP / iXabiso lixabiso nge-1.30 kodwa ufuna ukungena kwintengiso xa ibetha i-1.29, kuya kufuneka ufake i-odolo yomda. Kuphela kuxa ixabiso lakho elichazwe kwangaphambili libangelwa, ngaba iodolo iya kuphila. Kude kube lelo xesha, ihlala ikwimeko 'yokulinda'.
Lo myalelo uxelela umrhwebi wakho ukuba ufuna ukuthengisa 'ukhuseleko' kwakamsinya nje ukuba kufikelelwe kwixabiso elithile. Injongo apha kukunceda ukunciphisa ilahleko yakho kwindawo yokhuseleko.
Umyalelo wokwenza inzuzo uxelela umthengisi wakho we-forex ukuba unqwenela ukuvala urhwebo okanye isikhundla sakho ngokukhawuleza ukuba ixabiso libethe inqanaba elithile lenzuzo. Ngamanye amagama, izinto ezisisiseko zisebenza ngokuchanekileyo njenge-stop-loss order, kodwa ngasemva.
Iitshathi eziqhelekileyo ze-Forex
Kule nxalenye yekhosi yethu ye-forex, siza kujonga kwiitshathi eziqhelekileyo ezisetyenziswayo. Enkosi ngesixa esikhulu sezixhobo zohlalutyo lobuchwephesha ezikhoyo kuwe njengomrhwebi, zininzi iindlela onokuthi wandise ngazo amathuba akho okwenza inzuzo
Ngokubanzi, abathengisi basebenzisa iitshathi ze-forex mihla le ukuze bavavanye kwaye bahlalutye iindidi ezinkulu zeemali, kunye nezinye iimarike zezemali. Apha ngezantsi kwe-wndibeke uluhlu lweetshathi ezisetyenziswa kakhulu kurhwebo lwangaphambili, kunye nenkcazo yendlela esebenza ngayo nganye nganye.
Ishati yetshathi yenye yeetshathi ezilula, ke sisiqalo esihle ukuba ungumrhwebi we-newbie. Ngokusesikweni, kuseluncedo kakhulu kubarhwebi ukuba bafunde xa kufikwa ekuvavanyeni umfanekiso omkhulu. Uhlobo lwentsingiselo yetshathi yamaxabiso eneneni yenye yezinto ezenza ukuba ithandwe kangaka. Ngenxa yesitayile esisetyenzisiweyo, abarhwebi bayakwazi ukusika enye 'yengxolo exakekileyo' yentengiso kwaye bajolise nje kwiinyani ezilula.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iitshathi zomgca zahluke kakhulu kwiitshathi zebar kunye neetshathi zezibane (jonga ngezantsi). Okokugqibela, umzekelo, kubonisa ukuvulwa kunye nokuvalwa kwexesha, kubandakanya nexabiso lentengo. Itshathi yomgca kwelinye icala ibonisa umgca omnye kwisinye, esisiseko sokuqikelela. Oku kudibanisa ukuvalwa kwexesha ngalinye.
Umzekelo, xa ujonga itshathi yemihla ngemihla ebonisa iifayile ze amanyathelo ixabiso kwi-GBP / AUS, umgca obonisiweyo uza kubonisa isenzo sexabiso kweso sibini. Oku kuboniswa ngumgca wokudibanisa iziphumo kunye nokulahleka kwamaxabiso mihla le. Njengazo naziphi na izifundo eziphambili ze-forex eziza kukuxelela, iitshathi zamaxabiso emigca isebenza njengecebo lokucoca ulusu kubantu abafuna ukuhlalutya ulwazi kwintengiso exakekileyo.
Itshathi yomgca ibonakalisa uhlobo lwentengiso ngokubonisa kuphela ixabiso lokuvala. Ngokungagxili kwizenzo zexabiso ngaphakathi kokuvala nokuvula amaxabiso entengiso, itshathi yomgca yenza imikhwa ekulula ukuyibona, kunye neepateni ezibonakala ngokulula.
I-OHLC (vula, Phezulu, Phantsi, Vala)
Nangona enye itshathi eluncedo kubarhwebi, i-OHLC iyahluka kwitshathi yomgca. Oku ikakhulu kungenxa yokuba yitshathi yebha, kwaye ibonisa ulwazi oluninzi njengokuvula kunye nexabiso elisondeleyo lezibini, kunye nokuphakama nokuphakama. Itshathi yebar ye-OHLC yindlela entle yokuba ufunde nyani nawaphi na amaxabiso amabi okanye aqinisekileyo ngexabiso lesitokhwe. Oku kuyakuhlala kusenziwa ngaphakathi kwexesha elibekiweyo, nokuba iyure eli-1 okanye usuku lonke lokuthengisa.
Ibha nganye ojonge kuyo itshathi ye-OHLC iya kumela isakhelo sexesha. Umzekelo, ukuba ujonga itshathi yemihla ngemihla, ibar nganye iya kumela usuku olupheleleyo lokurhweba kwaye iya kutsala umdla wakho nakuphi na ukuhamba ngexabiso ngelo xesha.
Sibeke ndawonye amanqaku ambalwa anokukunceda ukuba uqonde nge-OHLC:
Umgangatho ophantsi wetshathi kukubonisa elona xabiso liphantsi lemarike- ngaphakathi kwexesha elithile.
Ukuphakama kwebha yetshathi kukubonisa elona xabiso liphezulu lemarike- ngaphakathi kwexesha elithile.
Udwi olungasekunene kwebhari lubonisa ixabiso lokuvala.
Udwi olusekhohlo kwibar lubonisa ixabiso lokuvula.
Ibha yomthengi ikwabizwa ngokuba yi-green bar, kwaye oku kubonisa ukuba ixabiso lokuvula lingaphezulu kwexabiso lokuvala.
Ibha yomthengisi ikwabizwa ngokuba yi-red bar, kwaye oku kubonisa ukuba ixabiso lokuvula lingaphantsi kwexabiso lokuvala.
Xa abathengisi befunda ukuba yeyiphi i-asethi yomkhombandlela kunye nokuhamba kwamaxabiso okungenzeka ukuba kuhamba, i-OHLC yindlela eluncedo kakhulu yokufumana umfanekiso ocacileyo.
Okokuqala kusetyenziswa abathengisi belayisi baseJapan ngee-1700s zokuqala, itshathi yesibane ngoku ithandwa kakhulu ziimfumba zabarhwebi kwihlabathi liphela. Itshathi yesibane ifana kakhulu netafile ye-OHLC esithethe ngayo mzuzwana odlulileyo. Kungenxa yokuba abathengisi banokufikelela kumaxabiso avulekileyo, avaliweyo, asezantsi kunye aphezulu ngaphakathi kwexesha elithile.
Ngenxa yetshathi yesibane yeephatheni zamanyathelo entengo kunye nokulula kwimbonakalo ebonakalayo yamehlo, kucingelwa ukuba yenye yeetshathi ezaziwa kakhulu kubathengisi be-forex.
Uya kubona amanqaku ama-3 ahlukeneyo 'kwikhandlela lamaxabiso':
Vula: Lo ngumzimba wekhandlela kwaye ubonakalisa amaxabiso okuqala easethi ngaphakathi kwexesha elikhethiweyo.
Vala: Lo ngumzimba wekhandlela kwaye ubonakalisa ixabiso lokugqitywa kwempahla ngaphakathi kwexesha elikhethiweyo.
Umbane: Ikwabizwa ngokuba sisithunzi, i-wick ibonisa ubungakanani bexabiso lexesha elithile. I-wick iluncedo ekuchongeni umfutho wentengiso.
Ikhandlela ngalinye liza kubonisa intshukumo yamaxabiso ngamaxesha owakhethileyo. Umzekelo, xa ufunda itshathi yemihla ngemihla, ikhandlela ngalinye liyakubonisa ukusondela, ukuvuleka, kunye nentambo ephezulu kunye nezantsi yosuku ngalunye.
Ungalibali, indlela elungileyo yabarhwebi yokufikelela kwezi tshathi kwaye ufumane okuninzi kubo kukuqala ngesibonelelo seakhawunti yedemo. Unokufumana iakhawunti yedemo ye-forex ngomthengisi wakho. Iya kukuvumela ukuba uziqhelanise ngaphambi kokuba uthathe i-plunge kwaye uqalise ukurhweba ngemali oyisebenzele nzima.
Iindlela zokurhweba nge Forex kunye neNkqubo
Ukuba usaqala kwihlabathi le-forex, kubalulekile ukuba ufunde i-ins kunye nokuphuma kwezicwangciso zorhwebo. Akukho qhinga lokurhweba elingcono kunelilandelayo, ke kuya kufuneka ufumanise ukuba yintoni esebenzayo kuwe kunye neenjongo zakho zexesha elide zezezimali.
Apha ngezantsi sidwelisa ezinye zezona ndlela zisetyenziswayo zokurhweba ngaphambili.
Oku kwaziwa njengecebo eliphakathi (okanye indlela). Ukurhweba igxile kakhulu kumfanekiso omkhulu xa kuziwa ekuhambeni kwexabiso. Abanye abaRhwebi basebenzisa ukurhweba ngokuthengisa njengendlela yokwandisa imisebenzi yabo yangoku yemihla ngemihla. Ukurhweba ngokurola kukwathetha ukuba uyakwazi ukushiya urhwebo lwakho luvulekile iintsuku okanye iiveki ngexesha.
Ngamafutshane, i-forex scalping isetyenziswa ngabarhwebi abafuna ukwenza urhwebo oluninzi kwisibini esinye, bavune izibonelelo zokuhamba kwexabiso elincinci ngexesha lokuthengisa.
Ngokubanzi, iscalping siyakubandakanya ukuthenga nokuthengisa urhwebo ngaphakathi kwemicimbi yemizuzwana, okanye imizuzu embalwa. Olu hlobo lwesicwangciso-qhinga sokurhweba senza ukuba kunokwenzeka ukuba abathengisi benze iintlobo ngeentlobo zeenzuzo ezincinci, zonke zongezwe ngokudibeneyo ukuze zenze inzuzo enkulu.
Ukurhweba kwangaphakathi kwemihla yeyona ndlela inobukrelekrele kurhwebo, kwaye kugxila kugxino lwayo lwamaxabiso e-1-4. Sicinga ukuba olu lurhwebo olukhulu kubaqalayo ngenxa yexesha elifutshane lokurhweba lihlala livulekile. Ukurhweba kwangaphakathi kwemini kukwabonelela abarhwebi ngokungena kunye neendlela zokuyeka ukulahleka kwaye zithathwa njengomngcipheko ophantsi.
Ukuba ufuna ukurhweba nge-forex kwinduduzo yekhaya lakho, kuyakufuneka ufumane iqonga lokuthengisa kwangaphambili elihlangabezana neemfuno zakho. Kukho amakhulu onokukhetha kuwo, ke ukuchitha ixesha elithile uphanda umthengisi ofanelekileyo kubalulekile.
Ezinye zezinto ekufuneka uzijongile njengoko zidwelisiwe apha ngezantsi:
Thembela kuMthengisi wakho
Sicinga ukuba kubalulekile uxolo lwakho lwengqondo njengoko kunjalo kwisipaji sakho sokurhweba ukuze uthembe ngokupheleleyo umthengisi wakho we-forex. Xa ufumana umthengisi ongathanda ukusebenza naye, sicebisa ukuba ujonge ukuba wonwabile ngamanqaku aphambili:
Ukuphunyezwa ngokukhawuleza kokudluliswa kwedatha
Ukuchaneka kwamaxabiso acatshuliweyo
Ukulungiswa ngokukhawuleza komyalelo
Inkxaso ethembekileyo yabathengi
Iiyure zokuvula ezihambelana nentengiso ye-forex (24/7)
Ukuba umthengisi wakho we-forex ubonelela ngezi nkonzo zingasentla (ngendlela oyithembileyo), oku kuyakwandisa amava akho orhwebo. Iya kukunceda ekwenzeni uninzi lwamathuba amatsha orhwebo ngendlela efike ngexesha nangendlela efanelekileyo.
Uninzi lwabarhwebi be-forex luya kukuvumela ukuba uthengise iakhawunti yakho ngokuzimeleyo. Oku kuthetha ukuba awudingi ukucela umrhwebi wakho ukuba athathe inyathelo egameni lakho. Unokwenza nayiphi na intshukumo yentengiso ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kwaye kufuneka ube nolawulo olungcono kwizikhundla ezivulekileyo nangenxa zokuza kwazo.
Amaqonga ezorhwebo aphambili e-forex aya kuba neendlela ezahlukeneyo zohlalutyo lobuchwephesha kunye nezixhobo zokurhweba onokuzifumana. Ungafumanisa ukuba amanye amaqonga anikezela izalathi ezigxunyekwe, ngelixa ezinye zibonelela ngohlalutyo olusisiseko kunye nohlalutyo lobuchwephesha ukuze ufunde. Sicinga ukuba uninzi lweempawu anazo umrhwebi, ngcono. Kodwa, kuxhomekeke kwisitayile sakho sokurhweba.
Ukuba nokufikelela kwiindaba zangoku zemali, uluhlu lweetshathi zexabiso kunye nezalathi zobuchwephesha ziya kukhulisa kuphela uhambo lwakho lokurhweba kwaye zikuncede ube ngumrhwebi ongcono kamva. Umzekelo weqonga lokurhweba elikhawulezayo nelilula yiMeta Trader 4/5. Uninzi lwabarhwebi be-forex banikezela la maqonga, alungileyo. Nokuba ziitshati eziphuhliswe kakhulu okanye iindaba zedatha yemarike ephilayo, la maqonga orhwebo athandwa ngesizathu.
Soloko ukhetha umthengisi we-forex onelayisensi epheleleyo kwaye ulawulwa. Oku kuya kukunika uxolo lwengqondo lokuba iakhawunti yakho yorhwebo kunye nolwazi lwakho lomntu lukhuselwe ngokwaneleyo.
Ukuqhubela phambili le khosi ye-forex, iqela lethu leengcali libeke ndawonye uluhlu lwabathengisi be-forex abadumileyo ukuze uqwalasele. Ngale nto ithethwayo, kuya kufuneka ujonge ukuba yeyiphi na imizimba yolawulo umthengisi ekubhekiswa kuye onelayisensi. Sikhetha imizimba enesidima njenge-FCA yase-UK, i-ASIC yase-Australia, okanye iCySEC eCyprus.
Kweli candelo lekhosi yethu ye-forex, siza kuxoxa ngezinye zezona zimpawu zibalulekileyo zobugcisa zisetyenziswa ngabarhwebi abanamava. Oku kukuvumela ukuba wenze uhlalutyo lwetshathi olwenziweyo kwaye ekugqibeleni-kuvavanye ukuba yeyiphi indlela isibini esithile semali esinokuthi sihambe kwixesha elifutshane.
I-SMA (Umndilili wokuHamba ngokuLula)
Umndilili ohambahambayo olula (i-SMA) waziwa kakuhle phakathi kwabarhwebi be forex. Esi sicwangciso sisoloko sibizwa ngokuba sisalathiso esisaleleyo kuba sisebenza kancinci kunokuba kunexabiso lentengiso langoku. Isalathiso sokurhweba se-SMA sigxile ngakumbi kwimbali yedatha yokuhamba kwamaxabiso kunezinye iindlela, isenza ukuba sisebenze kakhulu xa sibona imeko yonke.
Ukuba i-avareji yokuhamba kwexesha elifutshane ingaphezulu kwe-avareji yokuhamba kwexesha elide- ngumqondiso elona xabiso lakutshanje liphezulu kunexabiso lokuqala. Ungayithatha le njengomqondiso wokuthenga ngenxa yomqondiso wendlela yokunyuka kwintengiso. Ewe kunjalo, ukuba kwenzeka okwahlukileyo, kuya kubonisa ukuba indawo yokuthengisa inokwenzeka kulwakhiwo!
Ijelo le-donchian sisalathiso sobuchwephesha esinika umrhwebi into yokuba bhetyebhetye. Unokukhetha ixesha lakho lamaxesha, njengokuphazamiseka kweentsuku ezingama-20. Ngokwenza njalo, isalathiso esiya kulandela siya kuboniswa ngokusebenzisa esisezantsi esisezantsi nesona siphezulu siphezulu ngaphakathi kwamaxesha angama-20.
Ikhefu kwisitishi liya kwenza enye yezi odolo zimbini:
Thenga: Kumaxesha angama-20 okugqibela ixabiso lentengiso lingaphezulu kwelona liphezulu liphezulu
Thengisa: Kumaxesha angama-20 okugqibela ixabiso lentengiso lingaphezulu kwelona zantsi
Umndilili oshukumayo wejelo le-donchian unokujongwa naphi na ukusuka kwiintsuku ezingama-20 ukuya kwiintsuku ezingama-300. Isikhokelo somndilili wexesha elifutshane lokuhamba simisela ukuba loluphi ulwalathiso oluya kuvunyelwa.
Xa ujonga indawo yakho yokuvula zimbini iindlela onokukhetha kuzo:
Mfutshane: Umndilili wokuhamba wexesha elidlulileyo ungaphezulu komndilili wokuhamba weentsuku ezingama-20.
Ende: Umndilili wokuhamba wexesha elidlulileyo ungaphantsi komndilili wokuhamba weentsuku ezingama-25.
Ukuba uvule indawo ende kodwa intengiso iwela phantsi komda okhankanywe apha ngasentla, kuyakufuneka uthengise ukuphuma kwindawo yakho.
'Ukuqhawuka' ngumqondiso wokurhweba, odla ngokubizwa ngokuba kukuqhekeka komdibaniso. Ukuqhawuka kucingelwa ukuba sisicwangciso sexesha eliphakathi, njengoko iimarike zitshintsha phakathi kweebhendi zenkxaso kunye neebhendi zokumelana. Nokuba imida yokudityaniswa iphantsi okanye iphezulu- indawo apho umqondiso wokuqhawuka kwenzeka kuxa imarike igqitha ngaphaya kwemida. Nanini na xa kukho imeko entsha, ukuphuma kufuneka kwenzeke.
Ukuhlalutya ezi zikhefu yindlela entle yokuba wena njengomrhwebi uzame ukuqikelela ukuba imeko entsha sele iza kuqala. Ewe kunjalo, akukho siqinisekiso sokuchaneka kokuqhekeka okubonisa umkhwa omtsha. Kananjalo, unokuthatha isigqibo sokusebenzisa ilahleko yokumisa ukuze uzinike ithuba elingcono lokugcina imali yakho ikhuselekile.
Ukukhusela iiodolo zakho zentengiso kuyo nayiphi na intshukumo engalindelekanga ebaluleke kakhulu. Ukulandela uhlalutyo lobugcisa kunye nemarike yezemali, iindaba ziya kukunceda ekwenzeni oku. Ungazinika ukuqonda okungcono kweendlela zokulawula umngcipheko ngokuzama ukurhweba ngedemo kunye nokuthatha ezinye zeendlela zakho zokurhweba kwi-test drive.
Ikhosi ye-Forex: Iingozi
Xa kuziwa kurhwebo, kuhlala kukho umngcipheko oqhotyoshelweyo. Emva kwayo yonke loo nto, uya kuthengisa ngemali yakho.
Eminye yemingcipheko yokugcina iso xa kuthengiswa i-forex zidweliswe ngezantsi:
Umngcipheko 1: Ukuxhathisa
Njengoko sichukumisile ngaphambili kule khosi ye-forex, amandla okudlala angadlala indima enkulu kurhwebo lwakho- zombini ngendlela elungileyo nengalunganga. Ngamanye amagama, umlinganiselo omkhulu wokuphakama kwakho, kokukhona izibonelelo zakho (okanye ilahleko) ziya kuba njalo. Umngcipheko uhlala usithi njalo kunye nokunyusa inzuzo yakho, inokusebenza ngokuchasene nawe kwaye inyuse ilahleko yakho. Kananjalo, uyacetyiswa ukuba unciphise inani lesixhaso osisebenzisayo xa uqala ukuqala.
Umngcipheko 2: Amaxabiso wenzala
Xa umyinge wenzala welizwe usihla, imali yelizwe ekuthethwa ngalo iya kuba buthathaka. Imali ebuthathaka ibangela ukuba abatyali mali barhoxe kutyalo-mali. Ngenxa yokunqongophala konikezelo kunye nemfuno, oku kuthetha ukuba unokufumana ubunzima bokungazinzi kunye nokusasazeka ngokubanzi.
Ngokuchasene noko, xa imali inyuka, iya kuba lulwelo ngakumbi. Okukhona amanzi engamanzi, kokukhona abantu betyala imali, kwaye kokuhla ukusasazeka / ukungazinzi.
Umngcipheko 3: Iitransekshini
Ngexesha elithile lekhontrakthi, izinga lokutshintshiselana lingazinzi kwimarike. Oku kwaziwa njengomngcipheko wentengiselwano. Esona sizathu siphambili sokuguquguquka kwezinga lokutshintsha kwemali kuhlala kungumahluko kumaxesha kunye namaxabiso otshintshiselwano. Okude kudlula phakathi kokungena nokuvalwa kwesivumelwano, kokukhona umngcipheko ophakamileyo wolu tshintsho lwenzeka.
Yeyiphi i-Forex Broker oyisebenzisayo?
Njengoko sele siphawulile kwisikhokelo sethu sonke, kuya kufuneka usebenzise umthengisi othembekileyo nothembekileyo ukurhweba nge-intanethi kwi-intanethi. Nangona sixoxe ngezinye zeemetrikhi zophando ekufuneka uziqwalasele xa ukhetha iqonga, oku kungatya ixesha.
Kananjalo, apha ngezantsi uzakufumana ukhetho lwabarhwebi abadumileyo abasetyenziswa ngabarhwebi be forex.
I-AVATrade ithandwa ngabarhwebi abafuna unikezelo olubanzi lwezixhobo kunye neempawu. Nokuba ukhetha i-MT4 okanye iqonga le-AVATrade, uya kuba nakho ukufikelela kulwazi lweemarike, izikhombisi zobuchwephesha, kunye nezixhobo zokufunda zetshathi ezihambele phambili. Iqonga alihlawulisi khomishini, kwaye iidipozithi zisimahla. Izibini ezinkulu zihlala zisasazeka ngaphantsi kombhobho omnye.
Ikhosi yethu ye-forex ibeke ndawonye intshayelelo elula, kodwa enolwazi kakhulu kwintengiso ye-intanethi ye-intanethi. Sicinga ukuba ukuqonda uhlalutyo lobugcisa kunye nemigaqo ye-macroeconomic yexabiso lemali kubaluleke kakhulu. Nje ukuba ube neziseko ezantsi, usesikhundleni esihle sokuba ukwazi ukubeka ezakho iindlela zokurhweba. Oku kuya kukunceda ube ngumrhwebi ophumelele ngakumbi kamva ezantsi emgceni.
Ukuba ungumrhwebi ofuna ukuchitha imali encinci, unokufumana urhwebo usuku kunye nokurhweba ngokurhweba kukhetho olufanelekileyo kuwe. Ngenxa yobume bexesha elifutshane kwezi ndlela zokurhweba, oku kuhlala kuthetha ukwenza inzuzo encinci, kodwa rhoqo.
Ekugqibeleni, siyathemba ukuba le khosi ye-forex ibiluncedo ekuncedeni uzive ngathi ungumthengisi we-forex ozithembileyo. Konke okufuneka ukwenze ngoku kukuthengisa kwaye ngethemba lokufumana inzuzo engaguqukiyo. Ukuba usaxhalabile malunga nokuziphosa, akukho nto iphosakeleyo ngokuqala kwiakhawunti yedemo ye-forex ngelixa ufumana iinyawo zakho.
Ukuhlaziywa kokugqibela: Novemba 17th, 2021